Isak awo ho asɛm (1-7)
Ismael dii Isak ho fɛw (8, 9)
Wɔpam Hagar ne Ismael (10-21)
Abraham ne Abimelek yɛɛ apam (22-34)
21 Yehowa twaa n’ani bɛhwɛɛ Sara sɛnea ɔkae no, na ɛbɔ a Yehowa hyɛɛ Sara no, odii so pɛpɛɛpɛ.+ 2 Enti Abraham nkwakoraabere mu no, Sara nyinsɛnee,+ na ɔwoo ɔbabarima maa no wɔ bere a Onyankopɔn hyɛe no ara mu.+ 3 Abraham too abofra a ɔne Sara woo no no din Isak.+ 4 Bere a Abraham ba Isak nyaa nnawɔtwe no, otwaa no twetia* sɛnea Onyankopɔn kae sɛ ɔnyɛ no.+ 5 Abraham woo ne ba Isak no, na wadi mfe 100. 6 Ɛnna Sara kae sɛ: “Onyankopɔn ama maserew. Na obiara a ɔbɛte no ne me bɛserew.”* 7 Ɔtoaa so sɛ: “Hena na anka ɔbɛka akyerɛ Abraham sɛ, ‘Sara bɛma nufu’? Nanso hwɛ sɛ ne nkwakoraabere mu, mawo ama no.” 8 Na abofra no nyinii, na wotwaa no nufu; da a wotwaa Isak nufu no, Abraham tow pon kɛse. 9 Afei Sara hui sɛ ɛyɛ a na abofra a Egyptni Hagar+ woo no maa Abraham no redi Isak ho fɛw.+ 10 Enti ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ: “Pam abaawa yi ne ne ba no, na ɛnyɛ abaawa yi ba ne me ba Isak na ɛbɛbom adi ade!”+ 11 Nanso Abraham ba no ho asɛm a ne yere kae no anyɛ no dɛ koraa.+ 12 Ɛnna Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ: “Mma abarimaa no ne w’abaawa ho asɛm a Sara reka no nnhaw wo. Tie no,* efisɛ nea wɔbɛfrɛ no w’aseni* no nam Isak so na ɔbɛba.+ 13 W’abaawa no ba+ no nso, mɛma wayɛ ɔman,+ efisɛ ɔyɛ w’aseni.”* 14 Enti Abraham sɔree ahemanakye faa paanoo ne nsu kotoku* a nsu wom de maa Hagar, na ɔde sii ne kɔn ho, na ɔde abarimaa no kaa no ho gyaa no kwan.+ Na ɔkɔe kokyinkyinii Beer-Seba+ sare so. 15 Eduu baabi no, na nsu a ɛwɔ kotoku no mu asa, na ogyaw abofra no wɔ wura kusuu bi mu. 16 Ɛnna ɔtew ne ho* kɔpɛɛ baabi tenae, na ɔkae sɛ: “Mma minnhu abofra yi wu.” Enti ɔtenaa nkyɛn baabi maa ne nne so sui na ɔtew nisu. 17 Ɛnna Onyankopɔn tee abofra no nne,+ na Onyankopɔn bɔfo fi soro teɛɛm frɛɛ Hagar sɛ:+ “Hagar, dɛn na ɛreyɛ wo? Nsuro, na Onyankopɔn ate abofra no nne wɔ faako a ɔwɔ no. 18 Sɔre, ma abofra no so na so ne mu yiye, efisɛ mɛma wayɛ ɔman kɛse.”+ 19 Afei Onyankopɔn buee n’ani ma ohuu asubura bi, na ɔkɔsaw nsu guu kotoku no mu maa abofra no bi nomee. 20 Na Onyankopɔn dii abofra no+ akyi bere a ɔrenyin no. Ɔtenaa sare so, na ɔbɛyɛɛ agyantofo. 21 Ɔkɔtenaa Paran sare so,+ na ne maame kɔwaree ɔbea fi Egypt asaase so brɛɛ no. 22 Saa bere no, Abimelek ne ne sahene Pikol bɛka kyerɛɛ Abraham sɛ: “Onyankopɔn di w’akyi wɔ nea woreyɛ nyinaa mu.+ 23 Enti ka Onyankopɔn ntam sɛ worennaadaa me ne me mma ne m’asefo; na sɛnea mada ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ wo no, saa ara na wobɛyɛ me ne asaase a woabɛsoɛ so yi.”+ 24 Na Abraham kae sɛ: “Meka ntam.” 25 Nanso na Abimelek nkoa de anuɔden agye asubura bi,+ enti Abraham kaa ho asɛm kyerɛɛ no. 26 Abimelek buae sɛ: “Minnim wɔn a wodii saa dwuma yi, na wonkaa ho asɛm nso nkyerɛɛ me; ɛnyɛ nnɛ a, anka mentee.” 27 Ɛnna Abraham maa Abimelek nguan ne anantwi na wɔn baanu no yɛɛ apam. 28 Bere a Abraham yii nguan mma abere ason gyinaa nkyɛn no, 29 Abimelek bisaa Abraham sɛ: “Dɛn nti na woayi nguan mma abere ason yi agyina nkyɛn?” 30 Ɛnna ɔkae sɛ: “Gye nguan mma abere ason yi me nsam, na ɛnyɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ me na mituu saa abura yi.” 31 Ɛno nti na ɔfrɛɛ hɔ Beer-Seba*+ no, efisɛ ɛhɔ na wɔn baanu nyinaa kaa ntam. 32 Enti wɔyɛɛ apam+ wɔ Beer-Seba, na wowiei no, Abimelek ne ne sahene Pikol sɔre san kɔɔ Filistifo+ asaase so. 33 Ɛno akyi no, oduaa tamarisk dua wɔ Beer-Seba, na ɔbɔɔ Yehowa a ɔyɛ mmeresanten Nyankopɔn+ no din frɛɛ no wɔ hɔ.+ 34 Na Abraham tenaa* Filistifo asaase so kyɛe.*+
^ Anaa “otwaa ne dua.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “bɛserew me.”
^ Nt., “Tie ne nne.”
^ Anaa “ɔtew ne ho bɛyɛ sɛ nea wɔtow agyan a ɛbɛtɔ.”
^ Ebetumi akyerɛ “Ntanka Abura; [Nguan Mma] Ason Abura.”
^ Anaa “yɛɛ ɔhɔho wɔ.”
^ Nt., “nna pii.”